Ny lovan’i El Mallku ao Bolivia: ‘Fototra ny fizakan-tena’ ho an’ny vahoaka indizeny · Global Voices teny Malagasy
Lasa teny filamatry ny vahoaka Aymara ny 'Jiwaspach apnaqasiña'
Voadika ny 19 Avrily 2021 15:10 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, русский, Ελληνικά, Español
Pikantsary tamin'ny horonantsary fanomezam-boninahitra ‘Videos Bolivia’ ho an'i Felipe Quispe tao amin'ny Youtube, namboarin'ny Global Voices. Tsy fantatra ny mpaka sary tany am-boalohany.
Any Bolivia, re matetika any amin'ireo vondrom-piarahamonina indizeny Aymara – amin'ny fivoriana, fivoriambe, tanàna manodidina, kaonferansa, amin'ny haino aman-jery ary amin'ny resaka ifanaovana amin'ny olona eo an-toerana, indrindra ny tanora ny teny filamatra “Jiwaspachaw apnaqasjañasa” (“Fototra ny fizakan-tena” amin'ny teny Malagasy) .
Ilay mpahay tantara, mpanao politika sady mpitarika tantsaha efa maty, Felipe Quispe Huanca no nampalaza izany fiteny izany ary nanjary antso fampiraisana ho an'ny vondrom-piarahamonina Aymara sy ireo vazimba teratany ao amin'ny faritra izany. Nandritra ny androm-piainany, niady tamin'ny mpitondra mpanjanatany sy neoliberaly ity mpitarika Aymara fantatra amin'ny anarana hoe “El Mallku” (Aymara manondro ny voromahery “Condor”) ity, mandra-pahafatiny tamin'ny 19 Janoary. Niely hatrany amin'ny faritra lavitra indrindra amin'ny tanindrazany sy ny sehatra iraisampirenena ny firehan-kevitra revolisionera an'i Quispe. ary nisy fiatraikany maharitra izany. Raha ny marina, dia naminany izy fa aorian'ny fahafatesany, dia mbola hiangana ny firehan-keviny ary hipoitra ny “Mallkunaka” an'arivony (“mpitarika” na “filoha” amin'ny fiteny Aymara).
Mino izany fa marina koa ny filoha lefitr'i Bolivia ankehitriny, David Choquehuanca Céspedes, izay manana razambe Aymara ihany koa: “Tsy maty ny rahalahintsika Mallku, mihoatra ny fahafatesany izy, lasa mandrakizay izy, niverina tany amin'ny Pachamama [Reny Tany] ho voa iray, hanazava sy hitarika ny tolon'ny vahoakantsika. ”
Any Bolivia, manodidina ny 62,2 isan-jaton'ny mponina no milaza fa teratany. Ahitana vahoaka eo amin'ny telo tapitrisa ny firenena Aymara any amin'ny firenena Andeana any Bolivia, Pero, Chile, ary Arzantina izay miteny ny fiteny Qullan Jaqi Aru (fantatra ankehitriny hoe Aymara).
Na dia nandritra ny androny farany aza, tamin'ny faha-78 taonany, niresaka momba ny “Jiwaspachaw apnaqasjañasa,” i El Mallku, toy ity fanadihadiana farany amin'ny fiteny Aymara ity izay nomeny ahy sy i Victoria Tinta ho an'ny fantsona SeoTV channel tamin'ny 7 Janoary:
Tao anatin'ity tafatafa ity, nanipika i El Mallku fa nisy ireo zava-bitan'ny zanatany hatramin'ny taona 2000, saingy nilaza kosa izy fa nanakantsakana ny fahatapahan-kevitr'izy ireo tanteraka i Evo Morales. Nilaza ihany koa izy fa tsy maintsy filozofa ihany koa ny mpanao politika ary tsy maintsy mampianatra sy manoro lalana ny olona ny mpanao politika tsirairay fa tsy mitondra azy ireo toy ny omby, mitsikera ny antokon'i Evo Morales, Movimiento al Socialismo.
Teny Aymara “jiwaspacha” izay midika hoe “tenantsika”, “apnaqasxañasa” izay midika hoe” fizakantena” ireo andianteny ampiasain'i El Mallku.” Ny kolontsaina mampiavaka ny vahoaka Aymara dia manasongadina mandrakariva ny (isika-izahay) amin'ny ankamaroan'ny resaka. Maro koa ny Aymara milaza hoe “phuqhat tunu saphi amuyunakas luratanakas markaspachpankaskiwa,” izay midika hoe “ny firafitray, ny fotokevitra ideolojika fototra dia ao amin'ny vahoakantsika”.
Saingy tsy ny “jiwaspachaw apnaqasjañasa” ihany no fehezan-teny malaza an'i El Mallku. Malaza tamin'ny fanamafisany mafy ny fanoherana ny firafitra politika “Bolivianite”ihany koa izy ary manohana ny lova indizeny. Ohatra iray nandritra ny adihevitra tamin'ny fahitalavitra tamin'ny volana aogositra 2020 ny filazany hoe:
Tsy Boliviana aho … Qullasuyu aho, avy amin'ny firenena Aymara … Manana ny fiteniko, ny fivavahako, ny faritany ary ny filôzôfiako manokana aho.
Nanentana ny Aymara maro tany Bolivia io fehezan-teny io mba tsy hankalaza ny fahaleovantenan'ny firenena, izay ankalazaina isaky ny 6 Aogositra isa-taona.
Teratany toa ny vicuña na ny condor aho.
Tsy tiako ny miaina eo ambanin'ny tanan'ny mpampahory.
Mikasika ny governemanta vonjimaika (2019-2020) an'i Jeanine Añez, nilaza izy fa:
Tsy afaka mifankatia am-pirahalahiana amin'ny mpamono ahy aho.
Ny filàna hisian'ny hevitra voalaza ao amin'ny fehezan-teny hoe “Jiwaspach apnaqasiña” dia vao mainka niharihary tamin'ny fihetsiky ny governemanta vonjimaikan'i Jeanine Añez. Rehefa nifidy faobe ny Boliviana nanohana an'i Luis Arce tamin'ny Oktobra 2020 ary namarana ny governemanta tetezamita notarihin'i Añez, nandositra avy hatrany ny firenena ny tanany ankavanana, Arturo Murillo, sy ny minisitry ny fiarovana teo aloha Fernando Lopez. Avy eo, nosamborina i Añez tamin'ny 13 martsa, voampanga ho mpikomy, mpampihorohoro, ary niray tsikombakomba niaraka tamin'ireo mpikambana teo aloha tao amin'ny kabinetrany, momba ny fanonganana ny filoha teo aloha, Evo Morales.
Ho an'ny Aymara, “governemantan'ny vahiny”ny governemantan'i Añez, manondro an'ilay Boliviana-Kroaty Branko Jovičević izay minisitry ny Fandrindrana ny Fampandrosoana, ary amin'ny maha-minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bolam-bahoaka nandritra ny fitondran'i Áñez. Tsy ny ny Aymara ihany no tsy matoky ireo mpanao politika avy amin'ny fiaviana vahiny toa an'i Jovičević, fao ao koa sokajy politika Boliviana amin'ny ankapobeny. Nahatonga ny ankamaroan'ny mponina indizeny hisaintsaina ny fitantanan-tena [fizakan-tena], araka ny nolazain'i El Mallku ireo hetsika ireo .
Ankoatra izay, nanamafy imbetsaka i El Mallku fa ireo mpanjanatany toa an'i Cristobal Colón, Francisco Pizarro, hatrany amin'ny faribolan'i Evo Morales na ireo izay nanafika ny kitapom-bolam-panjakana nandritra ny governemanta tetezamitan'i Añez no mpanimba hatrany ny firenena.
Nanararaotra sy namafa ireo loharanon-karena voajanahary mba hahasoa ny fianakaviana sasany ihany ny governemanta toy izany. Ho an'i El Mallku, i Evo Morales ihany no firavaka mamirapiratra satria tsy nitondra nifototra tamin'ny fotokeviny na ny eritreriny manokana izy.
Natao fanadihadihana tamin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny gazety La Razón, nilaza ilay mpikaroka Aymara Carlos Macusaya fa mety hampitahaina tsara amin'ireo maherifo indizeny roa teo amin'ny tantara, Tupac Katari sy Pablo Zárate Willca ny fisongadinan'i El Mallku. Nanazava tamin'io lahatsoratra io ihany ilay sosiology Pablo Mamani fa nianiana ara-bakiteny hanohy ao anatin'ny fanahin'i Felipe Quispe, “ireo tanora nanatrika androany [tamin'ny fifohazan'i El Mallku] mba hahazoana fahalalahana feno ho an'ny vahoakany. Rehefa miteny an'izany aho dia tsy ny vahoaka Aymara ihany no tiako horesahina, fa ny vahoaka Quechua sy Guaraní ihany koa. ”
Mino ny ankamaroan'ny mponina indizeny fa nanolotra ny ainy i Mallku “El Mallku” Quispe Huanca mba hiady ho an'ny tanànany, ny fiteniny ary ny vahoakany. Izany no nahatonga ny foto-kevitr'ity mpitarika tantsaha teratany ity nanjary resabe hatrany hatramin'ny nahafatesany. Amin'ny asa soratra sy fanehoan-kevitra maro amin'ny tambajotra sosialy, milaza ny mpiserasera fa tsy maintsy aparitaka, resahana, fakafakaina ny fotokeviny mba hahafahan'ny vahoaka teratany tena mahavita mitantan-tena [mizaka tena].
Ity horonan-tsary manaraka ity, ohatra, dia mampiseho an'i El Mallku miteny amin'ny teny Espaniôla momba ny taranaka vaovao an'ny teratany izay manam-pahaizana, mpandinika ary mpanoratra, ny kolikoly amin'ny kilasy politika voaloton'ny fanjanahantany sy ny fasisma, ary ny filàna ho an'ny vazimba teratany hamorona ny governemantanay manokana.
VELONA EL MALLKU
MIAMPITA NY AFO
14 Septambra 2021Amerika Latina